महेन्द्रको सपनाः सार्वभौम र आत्मनिर्भर देश | नेपाल दर्शन
महेन्द्रको सपनाः सार्वभौम र आत्मनिर्भर देश
प्रभात अधिकारी २७ आश्विन २०७६
सात सालको परिवर्तनमा राजपरिवारको ठूलो देन छ । राजपरिवारको सहयोग नभएको भए, क्रान्ती केहि पर धकेलिने थियो । तर कांग्रेसीहरु सम्पूर्ण परिवर्तन आफैले गरेको ठान्दथे । गद्दिबाट हटिसकेका राजालाई हामिले पुन स्थापना गरेका हौ, त्यसकारण राजा केवल संवैधानिक भई राणाशाशन अवधीको जस्तै खोपिमा बस्नु पर्छ भन्ने घमण्ड राख्दथे । यस्तो परिस्थितिमा राजा र दल तथा नेताहरुविच राम्रो सम्बन्ध हुने कुरै भएन । दुबै शक्तिहरु मिलेर सहकार्य गरेको भए सायद १७ साल हुने थिएन कि ?
राणाशाशनको अन्त भएर प्रजातन्त्र आएपनि जनताको जिवनस्तरमा खासै परिवर्तन आएको थिएन । राजनैतिक क्षेत्रमा पनि जे जति सुधारहरु हुनुपर्ने हो, भएन । शिक्षित जनता अत्यन्त कम थिए । प्राविधिक दक्षहरु त औलामा गनिने नै भए । भौतिक पुर्वाधार तथा राजनैतिक संरचनाहरुमा नगन्य परिवर्तन भएको थियो । देशको सार्वभौमिकतामा समेत अनेकन प्रश्न उठाउन सकिने आधार हरु थिए । नेपाली कांग्रेशको सरकार बनेपछि नेपाली मन्त्रिमण्डलमा भारतिय सल्लाहकार नियुक्त हुन्थे । नेपालका हिमाली जिल्लाहरुमा भारतिय सैनिक तैनाथ गरेका थिए, कांग्रेश सरकारले । नेपाली कांग्रेशका नेताहरुले नेपालको मौलिकता र राष्ट्रिय पहिचानको त्यति महत्व दिदैनथे, उनिहरु हिन्दीमै भाषण गर्ने गर्दथे । कांग्रेशी नेताहरुको पोशाक तथा रवाफ पनि भारतिय नेताहरुको जस्तै हुने गर्दथ्यो ( हेर्नुहोस विपी र नेहरुको पोशाक) । नेपाललाई भारतको एक प्रान्त जस्तो रुपमा ठान्दथे । विपी स्वयममा नेपाल एक स्वतन्त्र राज्य हो भन्ने ठान्दैनथे (स्रोतः राप्रउ पोख्रेल, अन्नपुर्ण पोष्ट, विपीको सम्बोधन २००४ साल खालसा हाइस्कुल कोलकत्ता) ।
नेपालमा भारतिय पाठ्यक्रम नै पढाई हुन्थ्यो । मुद्राको रुपमा भारतिय नै बढि प्रयोग हुन्थ्यो । देशको हरेका क्षेत्रमा भारतिय प्रभाव थियो । यसप्रती जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइराला तथा बहुमत प्राप्त दल कांग्रेशले ध्यान दिएको थिएन । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताको लागी पहल गर्दा विपी लगायत कांग्रेशीहरु भन्ने गर्दथे, भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएपछि नेपाल भैरहनु पर्दैन ।
भारतिय प्रधानमन्त्री जवहरलाह नेहरु भारतको उत्तरी सिमाना हिमालय सम्म हो भन्दथे संसद भवनमै ।भारतका राजनितिज्ञ हरु नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा हेर्न चाहदैनथे । भारतिय पक्षको मत अनुसार नेपाल स्वतन्त्र राज्यको रुपमा नहोस, यदी हुन्छ भने पनि उनिहरुको मातहतको स्वतन्त्र होस ।
तत्कालिन कम्युनिष्टहरु यस्ता कुराहरुको बिरोध गर्दथे, तर उनिहरुको नत बहुमत नै थियो नत बलियो जनमत नै । त्यसैले भारतिय दादागिरी तथा नेपालको तत्कालिन परिस्थितीको सामना गर्न सक्ने आटिलो नेता कोहि थिएन ।
देशको सार्वभौमिकतामा पर्न गएको असर, जनताको स्तर तथा समग्र देश र विश्व परिस्थिती अनुसार नेपाललाई एक सबल मुलुक बनाउन महेन्द्रबाट कदम चालियो । पञ्चायती व्यवस्था सुरुवात भएसंगै नेपालमा भैरहेको भारतिय दादागिरी एक पछि अर्को गर्दै खत्तम भए । राजनैतिक क्षेत्रमा हुने भारतिय उपस्थिति लगायत यहाँको खानि स्रोत तथा जलसम्पदाको विषयमा नेपालको अहित हुने यौटा पनि सम्झौता भएन । जवकी प्रजातन्त्रीक समयमा विंसं. २०१४ सालमौ गण्डक तथा २०१२ सालमा कोसी सम्झौता भएको थियो । पछि महेन्द्रले गण्डक सम्झौतामा केहि फेरबदल गरी नेपालको हितमा पारे । सुरक्षका नाममा भारतिय सेनाको उपस्थििती सबै बन्द भए । नेपालको आफ्नै पाठ्यक्रम तयार भयो, नेपाली भाषामा । नेपाली मुद्राकै प्रचलनलाई प्राथमिकता दिइयो । भारतिय मुद्रामा प्रतिबन्ध झै भयो । यसरी विस्तारै देशको सार्वभौमिकता सुदृढिककरणमा केहि सफलमा भयो ।
राजा महेन्द्रबाट आफु राजा भएदेखि नयाँ नयाँ योजनाहरु आए । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गतेदेखि २०२८ साल माघ १६ गतेसमम करिब १० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा देशको महत्वपुर्ण परिवर्तनहरु भए । विदेश भ्रमण गरी देशलाई चिनाउने देखी देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका लागी थुप्रै महाशक्ति राष्ट्रहरु संग मित्रता कायम गरे । जनगणतान्त्रिक चिनको राजकिय भ्रमण र माओसंगको सम्बन्धका बारेमा बारबार चर्चा हुने गरेकै छ ।
उनको छोटो समयमा देश सबल रुपमा अडिनको लागी आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरुको निर्माणमा जोड दिइयो । गरिव जनताको जिवनस्तर उकास्न भुमी व्यवस्था ऐन तथा बिर्ता उन्मुलन गरी उनिहरुको शोषणबाट जनतालाई मुक्ति दिलाइयो । भूमिसुधारबाट एउटै व्यक्तिको नाममा भएको सयौ बिघा जमिन जोत्ने किसानहरुले पाए । यसबाट व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक सुधारमा टेवा पुग्यो ।
तत्कालिन समयमा राणा खलक तथा शाहहरुको नाममा भएका दरबार र महलहरु राष्ट्रियकरण गरी तिनमा सरकारी अड्डाखाना राख्ने काम भयो । राजमार्ग विकासको सवालमा आजप्रयन्त महेन्द्रको शाशनअवधिलाई उच्च मुल्यांकनका साथ हेरिन्छ । जतिबेला चिन भोकमरी र गरिविमा गुज्रिरहेको थियो, सो समयमा सबल कुटनितीको नमुना मान्नुपर्छ कोदारी राजमार्गको निमार्ण । पछि रसुवागढीको बाटो पनि बन्यो । पूर्व पश्चिम राजमार्ग यातयात सञ्जलमा कोशेढुंगा नै हो । यो सडक बन्नुभन्दा पहिले नेपालकै एक भुभाग बाट अर्को भुभाग जानको लागी भारत भएर जानु पर्दथ्यो । सार्वभौमिकताको रक्षा तथा विकास मोडेलको गतिलो उदाहरण हो पूर्व पश्चिम राजमार्ग । त्यस्तै त्रिशुली राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र पछि गोरखा चितवन राजमार्गलगायत सडकहरुले देशको विकासमा मेरुदण्डकै भुमिका खेले । जुन महेन्द्रको सबैभन्दा महत्वपुर्ण कार्य र सबल कुटनितिको नमुना हो भन्न सकिन्छ ।
महेन्द्रको १० वर्षे शाशन अबधिमा काठमाडौँमा भएका देवी देवताका मन्दिरहरुको जिर्णोद्धार गर्ने काम भयो । टुडिखेलको स्थरोन्नती, सैनिकमञ्च, रत्नपार्क र दरबारमार्गको पनि स्थरोन्नती गरियो । कला साहित्यको विकास, सभा समारोहको लागी मध्यनजर गरी महेन्द्र आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा राजकिय प्रज्ञा प्रतिस्ठानको निमार्ण भयो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभागृहको निमार्ण, भृकुटी मण्डप आदिको पनि निमार्ण भयो । अधिकाशं सरकारी भवनहरु पनि यसै समयमा बने, तर कर्मचारी र मन्त्रीका घर बनेनन । शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल ल क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, वाल्मीकि क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमार्ण कार्यहरु भयो । देशभर सयौँ विद्यालयहरु स्थापना भए । औधोगीक विकासको लागी देशका विभिन्न क्षेत्रमा औधोगिक केन्द्रहरुको निमार्ण भए । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र र पाटन औद्योगिक क्षेत्र यसका उदाहरण हरु हुन । विकासका गतिविधिहरु सबैको पहुँचमा पुर्याउन तथा सहज बनाउन देशलाई विकास मोडेल र प्रशासनिक केन्द्र भनि विभिन्न तहमा प्रशासनिक संरचनाहरुको निमार्ण भयो, जस्तै १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्र (पहिले ४, पछि विरेन्द्रको पालामा १ थपी ५) ।यसबाट जनताले प्रशासनिक र कानुनी सेवा सबैको पहुचमा पुग्न सक्यो ।
देशमा भष्ट्राचार थिएन । कर्मचारीहरु दरबार भनेपछि खुब डराउदे, कारण राजाको कानमा घुष लिएको वा भष्ट्राचार गरेको खबर पुगेमा तुरुन्तै जागिर जाने सम्भावना हुन्थ्यो । यस मानेमा धेरै हदसम्म कर्मचारीहरुमा अनुशासन थियो । उनिहरु मर्यादित र कर्मनिष्ठ भएर काम गर्दथ्ये । राजनैतिक आडमा जागिर खाने र प्रभावमा सरुवा बढुवा भन्ने संम्भावना नै थिएन । क्षमता भएका व्यक्तिहरु राजा स्वयम नै खोजी खोजी जिम्मेवारी दिन्थे । योग्यताको कदर हुन्थ्यो । योग्य व्यक्ति राजाको नजरमा पर्ने वित्तिकै जिम्मेवारी दिइहाल्थे, राजाको मा सिफारिस नै यस्तै व्यक्तिहरुको हुने गर्दथ्यो, अन्य सहयोगी हरुबाट । भेषबहादुर थापा यसैका एक प्रतिनिधी पात्र हुन, अरु थुप्रै उदाहरणहरु छन ।
देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम थियो । व्यवस्था पल्टाउनेबाहेकका अन्य कुराहरुका बारेमा लेख्न, बोल्न र बहस पैरवी गर्न छुट थियो । समाजमा उच्छृंखलता थिएन, अनुशासन थियो । अहिलेको जस्तो छोडेका साढे झै छौडा र अरिंगालपना कतै थिएन । अनाहकमा कोहि जनता कुटिने, मारिने अवस्था नै थिएन ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि अत्यन्त राम्रो थियो । परराष्ट्र नीति र मित्रराष्ट्रहरुमा सम्बन्ध अत्यन्त समधुर र सहयोगको आदानप्रदानमा अडेको थियो । वांगडुग सम्मेलनदेखि बेलग्रेड सममेलनसम्म आइपुग्दा नेपालको विश्व समुदायमा प्रतिष्ठा धेरै माथि पुगेको थियो । यस्तै सबल कुटनितिका कारण राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को सदस्यसमेत चुनियो । नेपालको परराष्ट्र नितिका विषयमा अध्ययन गर्नेहरुले राजा महेन्द्रको समयलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेर्ने गरेका छन ।
चिरञ्जीवी भट्टराई २८ वैशाख २०७७
छुवाछूत सम्बन्धि भ्रम र यथार्थ
प्रभात अधिकारी २७ चैत २०७६
धर्म-अध्यात्म बिनाको विकास ढाचा र बर्तमान विश्व संकट
नेपाल दर्शन २९ फागुन २०७६
संवैधानिक राजसंस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य
चिरञ्जीवी भट्टराई २० फागुन २०७६
शैव दर्शनको महिमा: रास्ट्रीयता बलियो बनाउने आधार